ချစ်ကြည်အေး: ချစ်ကြည်အေး သင်္ကြန်
ကြားရမှာက တုန်ချမ်း တုန်ချမ်း....
ကစမ်း ခုန်စမ်း ပက်ကြစမ်းဟ
ဟိုမှာ ဒီမှာ သူတို့ သူတို့.....
လမ်းပေါ် ရှိသမျှ အရူး နဲ့ အမူး....
အန်တီ ဦးဦး ဘဘတွေ
တရားမှတ်ရင်း တူးပို့ တူးပို့....
မြူးစို့ ရူးစို့ တနေကုန်အောင်
တအားထိုးပက်တာ ပိုက်စုတ် ပိုက်စုတ်....
စုံတွဲခုတ်တဲ့ ဟို အပျို
ကားပေါ်ရောက်မှ ငိုမဲ့ ငိုမဲ့....
တဘက်တထည် နဲ့ တိုးပြီးကာ
ဒီသင်္ကြန်ပျော်စရာ ခုန်ကြ ခုန်ကြ....
ညိုမြ လုပ်တဲ့ အပျိုကြီးတွေ
ဒီသင်္ကြန်မှာ ရိုးတိုး ရွတ....
ဟေလာ မောင်တို့ ဝါး..........။
ဒီဂျေ ပွတ်သံ ဘဝဂ်ညံ
ကြွက်လန် ခွက်လန် ဒီသင်္ကြန်ထဲ
ကြွက်မော ခွက်မော သင်္ကြန်တောထဲ
ကျမတို့ မြန်မာမှန်သမျှ စွဲလန်းခဲ့ဖူးကြတဲ့ နှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန် ရောက်လာပါတော့မယ်
အဝေးမှာ နေကြရတဲ့ ကျမတို့တတွေ အတွက်တော့ သင်္ကြန်ပွဲအတုလေးတွေ ဖန်တီးလို့ ရှာကြံပျော်ကြရပါတယ်။ အသက်လေးရလာတော့ အပျော်အပါးတွေထက် ကုသိုလ်ရေး လေးတွေဘက် ပိုအားသန်လာပါတယ်(အဟမ်း)
ဘာပဲပြောပြော လူငယ်တွေ အတွက်ကတော့ ဘယ်နေရာ ကြည့်ကြည့် ပျော်စရာ၊ ကဲစရာ၊ ရင်ခုန်စရာတွေ နဲ့ မွှမ်းထုံနေမှာပါ။ ကျမ နဲ့အတူ ဒီကဗျာလေးကို ခံစားရင်း အတာသင်္ကြန်ရဲ့ အငွေ့အသက်လေးတွေ ဖမ်းဆုတ်ခံစား ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ အားလုံးအတွက် မင်္ဂလာရှိသော ပျော်စရာ နှစ်သစ်သင်္ကြန်ပါရှင်....။
ဇွန်မိုးစက် Sun Apr 11, 07:20:00 PM GMT+8
ဇွန်မိုးစက် Sun Apr 11, 07:24:00 PM GMT+8
မနေ့က မလောင်းလိုက်ရလို့...ခုမှ လာလောင်းတာ။
ချစ်သောသူများနဲ့အတူ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ မမရေ။
(ရေရှားတဲ့ စင်္ကာပူမှာ သပြေခက်နဲ့ အသာလေးထပ်တို့လိုက်တယ်)
TZA Sun Apr 11, 07:32:00 PM GMT+8
သူများတွေ ဗနဲ့ဗွမ်းသွားတော့... ကိုယ်တို့က အများနဲ့မတူ တမူထူးအောင်..
လင်းခေတ်ဒီနို Sun Apr 11, 08:08:00 PM GMT+8
သံချပ်လေး စပ်ခဲ့တာကောင်းတယ်ဗျာ . . . .
Moe Cho Thinn Sun Apr 11, 09:00:00 PM GMT+8
အော်..သင်္ကြန်တွင်း အမရှေ့ ထွက်မလည်မိအောင် ရှောင်မှ..။:))
(ဒီစင်က သံချပ်ကောင်းတယ်၊ ညမိုးချုပ်ထိ လာနားထောင်မယ်ဗျို့)
အပြုံးပန်း Sun Apr 11, 09:32:00 PM GMT+8
အေးမြသွားအောင် ငွေဖလားနဲ့ ရေလောင်းလိုက်ပါတယ်။
sonata-cantata Sun Apr 11, 09:49:00 PM GMT+8
ချစ်ကြည်အေး ရေသဘင်အဖွဲ့ကြီး ကျန်းမာပါစေ)))
♥ကိုဇော်♥ Sun Apr 11, 09:55:00 PM GMT+8
သင်္ကြန်ကို ကျနော်က သူများတွေ လို မပျော်တတ်ဘူး . . .
ကျနော့်ဖာသာပဲ သူများတွေ ပျော်နေတာ ထိုင်ကြည့်နေတတ်တယ်. . .
ဒါကြောင့် အမြဲတမ်း မဏ္ဍပ်တော်ထိန်းပဲ ဖြစ်နေရတာ. . .
ဘာပဲ ပြောပြော သတိတော့ ရပါတယ် အမရေ...
ချစ်ကြည်အေး Sun Apr 11, 10:14:00 PM GMT+8
ချစ်ကြည်အေး မဏ္ဍပ်မှာ ရေလာကစား၊ သံချပ်နားထောင်သွားသူများ အားလုံး မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ပါ...:P
ရေပက်သွားသူများ အိမ်ရေစိုမယ် ဖြေးဖြေးပက်ကြပါဟ.....
အိမ်ရှင်က နိူ့ဆီခွက်နဲ့ ထွက်ခုတ်တတ်တယ် သတိထား....:)
what is good things Sun Apr 11, 10:43:00 PM GMT+8
သံချပ်လာနားထောင်ရင်း ရေပက်သွားတယ် (((((((((((((( ဗွမ်းးးးး(((( ဗွမ်းး
rose of sharon Sun Apr 11, 11:37:00 PM GMT+8
ဒဏ္ဍာရီ Mon Apr 12, 12:16:00 AM GMT+8
မမရေ. သံချပ်ကို နားလည်းထောင်တယ်..... အော်ပြီးတော့လည်း ဆိုသွားတယ်နော်။
ပျော်စရာတော့ အကောင်းသား။း)
ပျော်ရွှင်ဖွယ် အတာသင်္ကြန်ပါ မမရေ....
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် Mon Apr 12, 12:40:00 AM GMT+8
ကွေးနေအောင် က သွားပါတယ်..း))
အင်ကြင်းသန့် Mon Apr 12, 12:52:00 AM GMT+8
ရေက မနက်အစောကြီးကတည်းက လာလောင်းပြီးသားနော်မမ...မမက နို့ဆီခွက်နဲ့ ထွက်ခုတ်တတ်တယ်...ဟုတ်လား...ခွက်စုတ်လေးနဲ့ ခုတ်တာလောက်တော့ ရီတာပေါ့ ရီတာပေါ့... :)))))
မယ်ကိုး Mon Apr 12, 12:52:00 AM GMT+8
မမသင်္ကြန်မှာ လာပျော်ရင်း မမကို ရေလာလောင်းပါတယ်။ ရေစင်ကြောင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ငြိမ်းအေးပျော်ရွှင်ပါစေ။ =)
အဖြူရောင်နတ်သမီး Mon Apr 12, 01:30:00 AM GMT+8
~ဏီလင်းညို~ Mon Apr 12, 09:15:00 AM GMT+8
သင်းချန်နှစ်ဦး.....တွဲပို့.... တွဲပို့...... တွဲပို့ ကြပါကွယ်.........း))
ဗေဒိုးဘေ...... တပ်ပေ..... ဒိုင်းညှောင့်..........း))
Thant Mon Apr 12, 09:15:00 AM GMT+8
မောင်မိုး Mon Apr 12, 11:03:00 AM GMT+8
ဟိုအပျိုကြီး ရေနဲ့နူးတာ ပွစိစိ..ပွစိစိ
ညိုမြလုပ်တဲ့ အပျိုတွေ ကိုကျောက်ကြီးနဲ့ညားပါစေ။
ဆိုင်..ဆိုင်.....မဆိုင်..ဆိုင် ကဗျာစပ်ပြီး ရေလောင်းပစ်ခဲ့ပြီ။
ချစ်ကြည်အေး Mon Apr 12, 11:21:00 AM GMT+8
Yo Yo ! ရေလာပက်သွားသူများ၊ ခွက်စောင်းခုတ်ရင် ရီတတ်သူများ၊ ကွေးနေအောင် ကသွားသူများ၊ ဘရိတ်ဒန့်စ်ကသွားသူများ၊ သံချပ်လာနားထောင်သူများ၊ ရက်ပ်ပါများ-ထုပ်ပိုးသူများ၊ ကဗျာ ပြန်စပ်ခဲ့သူများ...အားလုံး အားလုံး ကျေးဇူးပါ......:)
ခုတော့ မနက် ၁၁ နာရီကျော်ရှိပြီမို့ ရေမလာသေးပါဘူး....
ထမင်းစားပြီးချိန် ၂နာရီလောက်မှာ ရေပြန်ပိတ်...အဲလေ ရေပြန်ပေးပါ့မယ်...အဲဒီ့ကျမှ အပြတ်ကဲကြတာပေါ့....O K ...!
SHWE ZIN U Mon Apr 12, 01:33:00 PM GMT+8
ဒို့လည်းပြန်လာမယ်နော် ရေပက်ချင်လို့ နို့ဆီခွက် ခွက်စောင်းခုတ်တာတော့ ကြောက်ကြောက်
Vista Mon Apr 12, 04:53:00 PM GMT+8
အိုးမည်းသုတ်သွားတယ် မမချစ်ကို ဟိဟိ
သက်ဝေ Mon Apr 12, 08:28:00 PM GMT+8
သံချပ်က လန်းတယ်ဗျာ.....း))
နှစ်သစ်မှာ အတာရေအေးနဲ့ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေကြောင်း
ဆုမွန်ကောင်း တောင်းသွားပါသည်။ (ခပ်တည်တည်နဲ့...)
အဟုတ်မှတ်ပြီး ချစ်ကြည်တယောက် ပီတိပြုံးလေး ပြုံးနေတုံး ဖွက်ယူလာတဲ့ အိုးမည်းနဲ့ လှမ်းသုတ်လိုက်ပါသည်... (ရုပ်ပြောင်နဲ့...)
တန်ခူး Mon Apr 12, 10:09:00 PM GMT+8
မ ရေ… ကုသိုလ်ရေးဖက် ပိုအာသန်လာတယ်ဆိုတာ ယုံပါတယ် မ ရယ်… ဆုံခဲ့ကြတယ်မိုလား… ဒါပေမယ့် ထွက်လေ၀င်လေမှတ်တိုင်း ဘလော့ဘလော့ဖြစ်နေတာခက်တယ်… မ ရေ… နှစ်သစ်မှာ ချစ်ကြည်အေးမြခြင်းတွေနဲ့ ဝေဆာပါစေလို့ …
ချစ်ကြည်အေး Mon Apr 12, 10:17:00 PM GMT+8
Vis ...မချစ်က မဲပြီးသား အိုးမဲလောက်က အေးဆေးပါ...:)
မသက်ဝေ လန်းတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးဗျာ...တီဗီကြော်ငြာက လက်မည်းကြီးဆိုတာ သူကိုး...:)
ညီမ တန်ခူးရေ...ဟိဟိ...ဟုတ်တယ်...ဘလော့ ဘလော့ ဖြစ်နေတာ...လတန်ခူးလို အလှထူးပြီး တန်ခူးလလို အထူးအေးမြပါစေ ညီမရေ...:)
sosegado Mon Apr 12, 10:26:00 PM GMT+8
သံချပ်က ဘယ်နှစ်ယောက်နှင့် ထိုးမှာလည်း၊ ဝင်ပါပြီနော်၊
သိကြားမင်းမှတ်တမ်းရေးဘို့၊ ------ ပြတ်နေလို့တဲ့၊
CCTV နဲ့ ရိုက်ထားမယ်ဆိုလား၊
မြစ်ကျိုးအင်း Mon Apr 12, 11:59:00 PM GMT+8
သင်္ကြန်ကို သံချပ်လေးနဲ့ ကြိုတယ် ဆိုပါတော့။
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ မချစ်ကြည် တို့ စုံတွဲ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။
kiki Tue Apr 13, 11:38:00 AM GMT+8
တုံချမ်း တုံချမ်း ...
အိုးမဲတော့ ရှာမတွေ့ လို့ ၊မှင်အမဲ နဲ့ သုတ်သွားတယ်နော် ..
ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်မင်္ဂလာပါ ..
ဝေလင်း Tue Apr 13, 03:21:00 PM GMT+8
Blog ပေါ်က အော်ဟ..အော်ဟ
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) Tue Apr 13, 10:02:00 PM GMT+8
ဂျစ်တူးဆီမှာတော့အသက်ကြီးလို့ မရောက်ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ 
ဒီမှာတော့သူက တုံချမ်း တုံချမ်းလုပ်နေတယ်
ပျော်ရွင်ပါစေ ညီမငယ် ရေ
♥ကိုဇော်♥ Wed Apr 14, 03:17:00 AM GMT+8
ချစ်မကြီးက အိုးမည်းလောက်တော့ သနားတယ်။
သူက နဂိုကတည်း နဂို ရှိပြီးသားလေ. . .
“ ပေါင်ချိန်ချစ်ကြည် ” ဆိုတာ မကြားဖူးကြဘူးလားကွ. . :P
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Wed Apr 14, 03:30:00 AM GMT+8